Socda Europe Archives | Page 3 of 23 | Save A tareenka
Solo safarka ay ugu fiican waa unadulterated damacbadnaan iyo Ukaalmayn. Waa xorriyadda inay yimaadaan oo tagaan sida aad fadlan, joogista hal meel dheer on jajuubi iyo boodi goobaha commercialized; haddii aadan la wareeriyay laga yaabaa. The only compromises you need to make…
The dillaacay Corona ayaa sabab weyn oo ka mid ah walaac dadka adduunka oo dhan, laakiin waxaa laga yaabaa mid ka mid ah arrimaha ugu weyn waa in dadka musaafiriinta ah soo food saartay. Maxaa yeelay, qorshyaasha safarka ay adag tahay in la beddelo iyo tigidhada inta badan horay jaale, it may make more sense for you…
Sidaas daraaddeed aad ugu dambeyntii u sameeyeen. Waxaad ku riday, waayo, aad fasaxa shaqada, tigidhada ka iibsadeen diyaarad iyo madax si Hungary fasax ay u qalmeen. Oo intuu in ay si fiican oo wanaagsan oo dhan – ka dib oo dhan, Budapest waa magaalo qurux badan – ha iibin naftaada…
A safarka safarka ka sugayeen waa in ay u safri Europe tareen. Waxaa si degdeg ah noqoto habka doorbiday bey'ada saaxiibtinimo safarka. safarka, in nuxurka, ma aha oo kaliya balaarineyso jahooyinka our laakiin balaarineyso our muuqaal. Ka fakar St. erayada goolasha Augustine ee, “Adduunku waa buug iyo kuwaas…
Tiyaatar caanka ah ee Europe waxaa leh tolmo wanaagsan galay dhar dhaqanka Yurub. tiyaatarada caanka ah ee Europe idiin Yaboohi qaab aan caadi ahayn. Waxay kaa tegi doonaan adigoo kiciyey, dhaqaaqay iyo spellbound! dabiiciga ah ee fanka waa soo Dagdagaysa iyo hal-abuur dushaan ka jirto. Hillaacyadan dhalaalaya ayaa sii jira…
aad wada ogsoon Sida, Venice waa magaalada ugu gaara farxad ee Yurub oo dhan, haddii aanay dunidu. Talyaaniga ayaa waxaa sameeyey oo gebi ahaanba ka mid ah kanaalada iyo aayado yar, kuwaas oo dhammaantood ku seexanaysaa jasiirad. Tani waxay magaalada ka dhigtay mid ka mid ah…
France waxay hoy u tahay kumanaan ka mid ah soo jiidashada. Laga soo bilaabo mid taariikhi ah Eiffel Tower in Paris si ay xeebaha pebbled ee Nice, dalka waxyaalo aan dhammaadka lahayn in ay sameeyaan. Laakiin waxa haddii aad booqasho ku Layover a, or you have already checked out of your hotel…
Europe soo saarta oo gubtay, lacagta ah oos kafeega, waxa ay leedahay Dukaamada ugu fiican iyo makhaayadaha ee Europe. Waa Mecca kafeega jecel iyo saraaxad, wax weyn ka badan oo kaliya in. dhaqanka Cafe waa daaqad dunida. Waxaan doondoono…